Toyota ရဲ့ ၂၀၁၉ Avalon Limited ပုံရိပ်များ! – AutoMyanmar
Toyota အနေနဲ့ ၂၀၁၉ Avalon ကို Detroit Motor Show မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ website ကပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာတုန်းက Toyota ရဲ့ Avalon ကားအသစ်ကို Detroit Motor Show မှာတွေ့မြင် ရမယ့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ Toyota အနေနဲ့ ၂၀၁၉ Avalon ကို Limited, Touring, XSE, XLE အစရှိတဲ့ Grade ၄ ခုနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Touring ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ Grade တွေက Hybrid အမျိုးအစားနဲ့လာတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ Toyota မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ Avalon ထဲက Limited Grade ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Photo collection အနေနဲ့က ဒါနဲ့ဆိုရင် ၃ ခါမြှောက်ပါ။
၁. ၂၀၁၈ Mitsubishi Eclipse Cross ရဲ့ပုံရိပ်အချို့၊ ၂. ၂၀၁၈ Honda HR-V ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အပေါ်ကပုံတွေကတော့ Toyota 2019 Avalon Limited ဟာသေသပ်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာကိုသက်သေပြနေပါပြီ။ Detroit Motor Show မှာ Toyota ၂၀၁၉ Avalon မိတ်ဆက်ခဲ့ပုံကိုတော့ အောက်ပါ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Toyota 2019 Avalon ရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖန်တီးမှုအပိုင်းကတော့ ??